SAWIRO;-Xasan Cali Khayre oo dhiira gelin balaaran u sameeyay Ciidamada Xasilinta Caasimada - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > SAWIRO;-Xasan Cali Khayre oo dhiira gelin balaaran u sameeyay Ciidamada Xasilinta Caasimada
SAWIRO;-Xasan Cali Khayre oo dhiira gelin balaaran u sameeyay Ciidamada Xasilinta Caasimada
July 24, 2017 Saadaq Laki572
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeer shaqo ku tagey qaar kamid ah xarumaha ciidamada Dawladda ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u sheegay ciidamadda xasilinta caasimadda ee uu maanta booqday in ay xoojiyaan xirriirka shacabka si ay ugu sahlanaato ka hortagga falalka guracan ee kooxaha nabad-diidka. “Shacabka waa inaad u nuglaataan ulana dhaqantaan si dabacsan oo ixtiraam leh xiliyada aad ku jirtaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabad diidka ee ku dhumaaleysanaya bulshada dhaxdeeda si ay u sahlanaato wada shaqeynta aad la leedihiin Shacabka”ayuu yiri Mudane Xasan Cali Khayre.
Ugu dambeeyntii, Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku adkeeyey Saraakiisha Ciidamada Xoogga in qorshaha isla xisaabtanka xukuumadda ee lagula dagaallamayo musuqmuusaqa loo daadijiyo sarkaal ilaa askariga dablaha ah si loo hubiyo in askarta si hufnaan leh u helaan xuquuqdooda iyo garaam bileedka dawladda ay ku bixiso ciidamadda Xoogga Dalka. Waxana kormeerka R/Wasaaraha ku weheliyey Wasiirrro ka tirsan Xukuumadda.
Erdogan oo maanta Booqanaya Khaliijka
Alshabaab oo Gacan iyo Lug ka goyey dhalinyaro